Cisco Atsimondrano : nitokona ireo mpitsara BEPC | NewsMada
Tsy metyhitsara ny taratasim-panadinana BEPC ireo mpampianatra ao amin’ny Cisco Atsimondrano. Nanizingizina izy ireo fa tsy hanomboka ny asa raha tsy azo ny tambin-karama nanomboka ny taona 2013 hatramin’ny taona 2015.
Efa nisy mpampianatra nahazo ny anjarany anefa tamin’ireo toerana hafa toy ny teny Itaosy sy Ampitatafika fa ny sasany kosa nanao antso an’efitra.
Mitentina 80.000 Ar isan-taona io tambin-karama io ka mahatratra 240.000 Ar izany ny vola tokony horaisin’ny mpampianatra iray raha hatambatra ny tao anatin’ny telo taona nisesy niasan’izy ireo maimaimpoana.
Mahatsiaro tena ho tsy misy manohina ireo mpampianatra manao fitakiana hatramin’izay ka miandry ny fitsarana BEPC vao manao hetsika mba hanairana ny sain’ny tompon’andraikitra. Ahiana ny hiteraka fahatarana eo amin’ny fivoahan’ny voka-panadinana izao fitokonana ao Atsimondrano izao.
Omaly hariva ihany, nilaza ny lehiben’ny Cisco Atsimondrano fa efa niravona ny olana ary niverina niasa ireo mpitsara.